Iivili zeDayimane yokuSila
Amacwecwe Ukusila Diamond
Amavili okusila e-PCD
Amacwecwe okusila e-PCD
Uxinzelelo lwedayimani oluphezulu, ubomi obude kunye nesantya esincinci sokugaya?
ngomphathi ku 21-10-14
Xa sisithi isihlangu sokuguba kwedayimane silungile okanye sibi, ngesiqhelo sijonga ukusebenza ngokugaya kunye nobomi bezihlangu zokugaya. Icandelo lezihlangu lokusila lenziwe ngedayimani kunye nesinyithi. Njengomsebenzi ophambili wobophelelo lwentsimbi kukubamba idayimane. Ke, ubungakanani begrit diamond kunye noxinzelelo ...
I-PCD DIAMOND YOKUGAYA AMASANGO
ngomphathi ku 21-08-24
I-PCD (i-polycrystalline yedayimani) yidayimani eyenziweyo esetyenziswa kwisicelo esingasebenzisi feri, inobulukhuni obuphezulu, amandla aphuke kakhulu kunye neepropathi ezifanayo, kunye nokumelana nokunxiba okugqwesileyo kunye nokuqhuba okuphezulu kobushushu. Izixhobo zokusila zomgangatho wePCD ziyilelwe ukususa ukusetyenziswa, ipeyinti ...
Ixabiso le-silicon nitride yentsimbi powder inyuke ngaphezulu kwe-20% ngonyaka-ngonyaka
Nge-Agasti, elona xabiso liqhelekileyo lesilicon nitride powder powder (Si: 48-52%, N: 30-33%, Fe: 13-15%), elona xabiso liqhelekileyo lentengiso yayiyi-RMB8000-8300 / itoni, eyayimalunga I-RMB1000 / itoni ephezulu kunasekuqaleni konyaka, ukonyuka malunga ne-15%, ngelixa ukonyuka kwamaxabiso kwakungaphezulu kwe-20% ...
I-Aluminium esekwe kwiVili yeNdebe yokuGaywa kweDayimani
Ingcaciso: Ububanzi: 4 ″ / 100mm, 5 ″ / 125mm; Ukuphakama kwecandelo 8mm; M14 okanye 5 / 8-11 Umsonto; I-Grit # 30, # 50, # 100. (Nceda uhlawule umtya we-5 / 8-11 Thread Ngokwesiqhelo usetyenziswa kwiNtengiso yaseNyakatho Melika) Isicelo: seGranite, imabhile, ikhonkrithi, ibrock… .. Uphawu: 1. # 30 kwinyathelo lokuqala c ...
10.5, Change Fast Tshintsha Base Plate Kuba Amacwecwe ezintandathu Metal Trapezoid
ngomphathi ku 21-07-22
Isiseko sePlate ye-Metal Trapezoid-270mm, iiBhayi eziSithandathu lelinye icandelo leNkqubo yokuTshintsha ngokuKhawuleza (i-FCS). Oku kulula ukusebenzisa inkqubo ye-SNAP-ON / SNAP-OFF yemagnethi. Nje ukuba i-Base Plate ifakiwe, AKUFANELE isuswe. Iimpawu zokutshintsha ngokukhawuleza kwesiseko seplate ...
Diamond trapezoid eziphathekayo esirhabaxa isixhobo wokucoca pad lokusila iimbadada ipleyiti
Ipleyiti yokusila yedayimani sesona sixhobo sidumileyo sophahla, uyilo olulula lotshintsho kwaye ubukhulu becala konga ixesha lokutshintsha isihlangu sokuGaya. Akukho mfuneko ye-screwdriver kunye ne-bolt, lungisa nje ngesandla. Uyilo lwe-wedge lunokwenza ukuba isicathulo sokugaya sidibanise umatshini ngokukhawuleza. Uhlobo lweebhondi luhlu ukusuka kwi-extral s ...
Yintoni enxibayo entlokweni yedayimane?
Ukunxitywa kwesixhobo sedayimane kunxulumene ngokusondeleyo neemeko zayo ezilayishiwe, ke iimeko zokuqhubekeka ziya kuba nefuthe elibonakalayo ekunxibeni, kwaye umxholo wentloko yedayimane nawo wenza umahluko omkhulu. Ngokubanzi, umxholo wedayimane usezantsi kwaye ukusetyenziswa kwamandla kuphantsi, nangona kunjalo, ukuba ...
Yintoni ubuchule kwecandelo diamond?
Ingcinezelo kunye neqondo lobushushu elinyukayo Ngexesha lokushushubeza okushushu, okokuqala izinto zomgubo oza kucocwa zicinezelwe kubungakanani obuthile, oko kukuthi, ngexesha lokushushu ngokucinezela okushushu, uxinzelelo oluthile lusetyenziswa kwizixhobo zomgubo kuqala, emva koko temprature iphakanyisiwe. Kule nqanaba ...
Diamond Ukusila Icandelo kunye girt ezahlukeneyo kunye imilo isikwere okanye imilo ngeenxa zonke, laser welding okanye aqhelelkileyo ngesilivere nge welding kwi besila ngumfanekiswana kunye notshintsho lula, iqhosha lemenyu lock, redi lock, uze ulungise kumatshini wokugaya phantsi, umgangatho grinder, umgangatho wokucoca, kumgangatho wesamente, umgangatho welitye, iterrazzo concre ...
INDLELA YOKUKHETHA IDAYIMANE YOKUGAYA IVILI
Amavili okusila edayimane aneendidi ezahlukeneyo, umzimba wohlulwe wabanzima, uphakathi, uthambile njalo njalo; Ingqolowa yahlulwe yarhabaxa, iphakathi, ilungile, njlnjl. Ke baneempawu ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa okwahlukileyo. Xa sikhetha ivili lokusila kwedayimane, sinokukhetha elungileyo ngokuya kwabo ...
UDAYIMANE WABONA IBHOLA
Kukho iintlobo ezi-3 zedayimani yesarha: Idayimani 1.Sintered wabona blade: zibandakanya sintering ebandayo-ngokucofa sintering eshushu icinezelwe, kwaye thenpressed kwaye sintered xa sukube. 2.Welded blade saw blade: zibandakanya ibhondi kunye ne-laser weldin ...
Intambo yedayimani yabona:
ngomphathi ku 21-06-02
I-1.Diamond Wire Saw For Quarry: Sincoma ucingo lwe-rubber, luyakwazi ukukhusela intambo ye-wire kakuhle kwaye yonyuse amandla omnxeba. Irabha inokumelana nobushushu obuhle, kwaye inokusetyenziswa xa amanzi engonelanga. Bhetyebhetye Strong ukunciphisa cut-in-nye-icala ingxaki 2.Diamond Wi ...